Inqubomgomo Yemfihlo GDPR / CCPA - HHO FACTORY, Ltd.
Inqubomgomo Yemfihlo GDPR / CCPA
Le nqubomgomo yobumfihlo ikwembulela ukuthi sisebenzisa kanjani imininingwane yomuntu eqoqwe kuleli sayithi. Umgomo wethu ukugcina imininingwane yangasese esiyithola esizeni sethu iyimfihlo ngokuphelele futhi isetshenziselwa izinhloso zangaphakathi kuphela.
Ngeke sabelane ngemininingwane yakho yangasese namanye amaqembu.
Le Nqubomgomo Yobumfihlo isebenza kuphela kulwazi oluqoqwe yi-HHO FACTORY, amawebhusayithi we-LTD
Uyacelwa ukuthi ufunde le nqubomgomo yobumfihlo ngaphambi kokusebenzisa isiza noma uhambise noma imiphi imininingwane yomuntu. Lesi saziso sisebenza kuyo yonke imininingwane eqoqwe noma engeniswe kwiWebhusayithi ye-HHO, i-LTD.
Kwamanye amakhasi, unga-oda imikhiqizo, wenze izicelo, ubhalise ukuthola izinto zokwakha. Izinhlobo zolwazi lomuntu siqu (isib. Igama, Ikheli le-Ikheli le-imeyili njll) eziqoqwe kulawo makhasi zizophathwa ngokunakekelwa okukhulu futhi ngeke zisetshenziswe ngezindlela ongavumanga ngazo.
Yonke imininingwane eqoqwe igcinelwe ukucubungula i-oda kanye nensizakalo yamakhasimende kuphela.
Ngesikhathi sokusebenzisa iwebhusayithi yethu, sizoqoqa imininingwane yomuntu ongayikhombi ukwandisa ukusebenza kwewebhusayithi nokwenza ukufinyelela kwakho kube lula futhi kusebenza kahle. Sigcina imininingwane engaziwa eyomuntu siqu futhi siyisebenzisela ukusungula ukuthambekela kokusebenza kwewebhusayithi, siqaphe ukusebenza kwewebhusayithi, sithuthukise ukwakhiwa kwewebhusayithi nokusebenza kwayo, sifeze ama-oda, sazise amakhasimende akhona nabangabahlinzeki ngezinsizakalo zethu, nangezinye izinjongo zebhizinisi.
Ukuqoqwa kwethu kwemininingwane yomuntu engavezi kungahle kusetshenziswe amakhukhi. Phakathi kokunye ukusetshenziswa, amakhukhi asivumela ukuletha okuqukethwe okuqondene nezintshisakalo zakho, ukukusindisa ekuphindeni ufake idatha yakho yokubhalisa ekuxhumeni ngakunye, nokunikeza izici ezinjengokukhokhwa kwamakhasimende kwe-inthanethi namakalitshi okuthenga.
Ikhukhi ngandlela thile lisinikeza ukufinyelela kukhompyutha yakho noma noma imiphi imininingwane ngawe, ngaphandle kwedatha okhetha ukuyabelana nathi. Ungakhetha ukwamukela noma ukwenqaba amakhukhi. Iningi leziphequluli zewebhu lizemukela ngokuzenzakalelayo amakhukhi, kepha ngokuvamile ungashintsha izilungiselelo zesiphequluli sakho ukuze wenqabe amakhukhi uma uthanda. Lokhu kungakuvimbela ekusebenziseni ngokugcwele amawebhusayithi we-HHO FACTORY, e-LTD.
Sebenzisa i-VISA MASTER, i-AMERICAN, i-EXPRESS, i-DISCOVER, i-Direct DEBIT yokuthenga imisebenzi. Bangabathengisi abagunyaziwe online.
Sizocela abathengi ukuthi bahlinzeke ngemininingwane yomuntu uma befaka i-oda, njengegama nekheli, imininingwane yekhadi lesikweletu, nekheli le-imeyili. I-HHO IQINISO, i-LTD inenqubomgomo yayo Yobumfihlo echaza ukuthi imininingwane yakho icutshungulwa futhi ivikelwe kanjani. Yonke imininingwane engakhombisi umuntu uqobo nemininingwane ekhomba uqobo echazwe ngenhla igcinwa kumaseva wedatha akhawulelwe.